SKU: 5173-46-6. Udidi: abanye
I-Tren iyinxalenye enamandla kakhulu engeyi-methylated kwaye ingachaphazela kakubi ixinzelelo lwegazi, ixabiso le-lipid, amaqondo e-cholesterol kwaye iya kubeka ingxaki kwinkqubo ye-endocrine. Elinye icala eliphantsi kweTren liyakunokwenzeka ukuba i-progestin yenzelwe i-gyno okanye i-gyno ekhoyo. Kunconywa ukuqhuba i-P-5-P kumjikelezo kwibhotile ephakanyisiweyo yokulinganisa. Umsebenzisi ofumana ama-flare-ups kufuneka akwandise umlinganiselo kwi-150-250mg.
Xa emzimbeni, u-Estra-4, i-9-diene-3, i-17-dione igqiba ukuguqulwa kwiTrenbolone. I-Trenbolone yi-anabolic steroid enamandla, ebophezela kwiindawo ezithile ezifumanekayo kwiisishu zokuzala, izihlunu kunye namafutha. I-Trenbolone iyanciphisa i-nitrogen excretion kwi-breakdown (i-anti-catabolic). Umlinganiselo we-anabolic (isakhiwo se-muscle) kwimiphumo ye-androgenic (i-virilizing) imiphumo eqhelekileyo ye-anabolic steroids. I-Trenbolone inexabiso eliphezulu le-anabolic. Umlinganiselo we-anabolic we-Testosterone yi-100, kodwa isixa seTrenbolone sika-500.
"Uya kufumana amandla kunye nobunzima, andizange ndibe nomphumo wokuxhamla, ndandifumana amanqatha (kodwa ke oko kudla ukudla kwe-6000). Iya kuvelisa uxinzelelo lwegazi, fumana uncediso lwenkxaso / umjikelezo wenkxaso yomjikelezo kwaye mhlawumbi ungeze i-hawthorn eyengeziwe. Ndagijima yam ngeeveki ze-6 kwi-100 / 100 / 100 / 100 / 150 / 150, ndiza kuhlala ku-100mg "
I-Estra-4, i-9-diene-3, i-17-dione i-Recipes eluhlaza